Naqshadaynta Sharaxaadaha Waxyaabaha Aad Tahay Inaad Ka Fiirsatid Markaad Raadineysid Magaca Domain Right
Markaad ka fikiraysid sameynta joogitaanka online, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahaysameeyaa inaad diiwaangeliso domainkaaga. Doorashada magac domain waa muhiim sababtoo ah waxay noqon doontaaAma ha ku guuleystaan ​​ama ku guuleystaan ​​hawshaada. Magaca domainka wuxuu ku hubiyaa internetkajoogitaanka, sameynta websitekaaga muuqaalka. Raadinta magaca domain ee saxda ah,hubi waxyaabaha qaarkood, in Sare khabiir hoggaamineed ee adeega Digital, Julia Vashneva, ayaa kugula talineysa inaad tixgeliso.
Helitaanka shirkad lagu kalsoon yahay waa muhiim. Inta badan shirkadaha qaarkood ayaa bilaabay inay xayaysiiyaanadeegyo xad-dhaaf ah, iyo ka dib, wadashaqeyn lala yeesho iyaga ayaa noqda wax laga xishoodo. Dhanka kale,Shirkadaha kale waxay ka qaadaan qiimaha sare laakiin ma bixin karaan adeegyo tayo leh. Samee baadhitaan taariikheedShirkadda aad rabto inaad la shaqayso si aad u ogaan doonto runta ku saabsan.
Marka aad ku jirto nidaamka diiwaangelinta magacaaga, doorasho magacawaxay noqon kartaa marmarka qaarkood. Waxa aad u baahan tahay inaad tixgeliso waa in magaca ay tahayWaa sahlan tahay in la xasuusto lana xiriiro xiriirka shaqada ee website-kaagawaa inuu qabtaa. Intaa waxaa dheer, waa inay sidoo kale noqotaa magac leh erey si fudud loo raadiyo.
Xuquuqda magaca Domain Name
Hubi in magaca domainka aad doorato uusan ahayn qof kale oo sidan oo kale ahwaxaa laga yaabaa inuu kuu keeno dhibaato sharci ah. Waxay fiicnaan doontaa in la hubiyo in shirkadda, taas oo adigadoortay diiwaangelinta domain, si cad u sharaxay siyaasadda user ee magacyada domainwaxay bixiyaan. Samee doorashada saxda ah ee dheereynta si aad ugu isticmaasho magacaaga domain, tusaale ahaan,waxay noqon kartaa .com .net .org iyo wax ka badan, waxay ku xiran tahay ujeedooyinka boggaaga.
Xulashada erayada muhiimka ah ee muhiimka ah ayaa ah arrin muhiim ah oo loo tixgeliyo markaad dooratidmagaca domain. Makiinadaha raadinta ayaa u muuqda inay u heelan yihiin magac magac domain oo muhiim ah. Xaaladdan, adigawaa inaad isku daydaa oo isticmaashaa erayga muhiimka ah ama weedha aad jeceshahay in aad ku hagaajiso boggaagaoo isku day inaad samayso hareeraha magaca domainka.
Sidoo kale waa inaad isku daydaa inaadan laheyn diiwaangelinta magacaaga domain adigoo adeegsanaya martigeliyahaaga internetka. Sababtoo ahMarkaad go'aansato in aad qayb ka mid ah siyaabaha aad u martigeliso (taas oo ah mid caadi ah), waxay noqoneysaa madax xanuun u dhaqaaqadomainkaaga sidoo kale, haddii ay taasi dhacdo, way fiicnaan doontaa haddii aad kala qaybisay Source .